Xasan oo magacaabay la-taliyeyaashiisa arrimaha dastuurka iyo federaalka - Caasimada Online
Home Warar Xasan oo magacaabay la-taliyeyaashiisa arrimaha dastuurka iyo federaalka
Xasan oo magacaabay la-taliyeyaashiisa arrimaha dastuurka iyo federaalka
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa wareegto uu soo saaray ku magacaabay laba nin oo noqa doona la-taliyeyaashiisa arrimaha dastuurka iyo nidaamka federaalka.
Labada la-taliye ee caawa la magacaabay ayaa kala ah:
Dr. Cabduraxmaan Cabdullaahi Baadiyow oo loo magacaabay la-taliyaha Madaxweynaha JFS ee arrimaha dastuurka.
Iyo Axmed Cabaas Axmed oo loo magacaabay la-taliyaha Madaxweynaha JFS ee arrimaha federaalka.
Qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu yiri, “Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Alle uga baryey La-Taliyeyaasha cusub in uu u fududeeyo masuuliyadda culus ee loo igmaday, waxa uuna kula dardaarmay in ay si hufan oo daacadnimo leh ugu adeegaan dalka.”
Mas’uuliyiinta la magacaabay ayaa ka soo shaqeeyay hay’adaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay’ado kale oo muhiim ah, waxayna khibrad dheer iyo aqoon durugsan u leeyihiin howlaha uu Madaxweynuhu u igmaday ee arrimaha dastuurka iyo federaalka.